Waayo, kuwa raadinaya goobta kulanka kula Seeraar a la aamini, dallacsiinta iyo fursado fiican, 1xBit waa doorasho fiican. In this article, waxaan ku tusi doonaa sababaha ugu waaweyn ee aad si ay u maal criptomoedas aad – ama ma, haddii darrada ah, in aad opinion, bi'isaa wanaagsan – 1xBit Brazil ah.
Goobta ayaa la bilaabay bishii January ee 2017 waayo, gacanta “cripto” Giant Ruush 1xBet 1xBit karo ka faa'iideystaan ​​waayo-arragnimo iyo sumcad of sharadka waa “walaashaa” oo uu si degdeg ah ku koray, korodhsi criptomoedas kalsooni users. E, ka faa'iidaysanaya koritaanka qiimaha si deg deg ah oo caan ah Seeraar iyo altcoins kale intii uu sanadka ugu horeeya arkay tirada dadka isticmaalaya bood lambarada in xasiloonida damaanad iyo faa'iidada ganacsiga.
Daboolaya tiro badan oo isboortiga iyo ciyaaraha elektarooniga ah, goobta khamaarka 1xBit sidoo kale leedahay wax badan oo gunooyinka iyo horumarka si loo soo jiito xiisaha dadka isticmaala cusub oo ay u ilaaliyaan danta ciyaartoyda mar walba sare.
Iyo awood u leh inay sheegin halka uu sidoo kale ka ciyaari barbaro dareenka ciyaartoy badan oo door bidaan in ay sii qarsoodi ah.
Seeraar bonus soo dhaweyn 1xBit
Waayo, kuwa kaliya meel amarka, waa inay noqdaan mid dheereysa oo sahlan caalamka, bonus soo dhaweyn yahay 100% deposit ugu horeysay, ilaa qadarka ₿1. ugu yaraan in la geeyaa xisaabta si ay u helaan gunno waa m₿5 (₿0,001).
Laakiin gunno ma waxaa joojiyo! awood “dallacsiinta bonus ka qayb” shaqada “My Account” e, deposit ugu horeysay, sidoo kale heli gunno loogu tala labaad, kayd saddexaad iyo kan afraad. Total, Abaalmarinta waxay gaadhi kartaa ₿7!
Qiimayaasha waa waayo-aragnimo ugu badnaan:
waayo, deposit 1aad – 100% ilaa bonus ₿1
waayo, deposit labaad – 50% ilaa bonus ₿1
waayo, taangiga saddexaad – 100% ilaa bonus ₿2
qolka taangiga – 50% ilaa bonus ₿3
Turnaround had iyo jeer waa 40 jeer qiimaha ugu sareeya, deposit, oo waa laydiin oofin karo lacag caddaan ah ama qaab “dhibcood bonus” (laakiin aan samayn walwal, waxaa jira siyaabo badan si ay u isticmaalaan dhibcahaas). Waqtiga ugu danbeeya ee waafaqsan gunooyinka deposit, kuwaas oo had iyo jeer yihiin 30 maalmood. Xaaladaha waxaa sharad la heerka ugu yar ee ah 1,6 in aanay bixinta midhaha (Cashback) oo waxay shaqaynaysaa muddo dhan khamaar ah hal ama accumulator.
1Xbit inuu saxiixo, aad leedahay in la sameeyo oo dhan waa click on the “diiwaan oo ay helaan gunno”. soo gabagabeeyay. intaas ka dib, Waxaa kaliya si ay u caddeeyaan in aadan robot ah iyo waxaa hore u diiwaan-gashan. site waxay muujinaysaa in aad magacaaga iyo isgarad-. haddii kale, aad email ah in madal soo diri kartaa in ay email u soo dir macluumaad this, laakiin aan loo baahdo.
Sida wax walba waxaa loo sameeyaa by criptomoedas ma yihiin macluumaadka shakhsiyeed ama xaqiijinta loo baahan yahay, guriga laga arko isdaba more, account iyo xiranto user lumiyo lacag.
Sidee si aad u hesho gunno Seeraar tallaabo
Scan adigoo gujinaya ah “diiwaan oo ay helaan gunno” ..
M₿5 dhigi deebaaji ugu yaraan.
Tan iyo markii ay roll-badan 40 jeer lacagta deebaajiga waa rumoobay, aad hesho gunno, qiimihiisu yahay ilaa ₿1 oo taam u bonus ee deposit labaad waxay noqon doontaa.
dallacsiinta kale 1xBit
Waa mid aad u fudud in laga badiyay ka mid ah lacagihii aad u badan iyo horumarka in cayaaraha 1xBit khamaarka casino iyo dalabyo ka diiwaan gashan users. halkan, waxaan diiradda on xudunta, taas sharxayaa ay hawlgalka.
Marka deposit ugu horeysay, ciyaaryahanka waa inay doortaa mid ka mid ah labo dalab oo ay helaan dhibcood sida bet. Iyo sidii aad ku heli karo dhibcaha, waxaad isticmaali kartaa kaydinta 1xBit. Ku kaydi ka dib.
mid ka mid ah laba dallacaadaha oo keliya noqon kartaa firfircoon ee wakhti kasta. Waxaad bedelan kartaa ka midba midka kale, laakiin dhan dhibcood la isticmaalin waxaa laga badiyay.
Ciyaartoyda jecel inay sharadka live door bidaan bonus this. Kaliya sax ah ee noocan ah bet iyo maalin kasta. In badan oo aad soo duuduubo, in badan oo aad kasban dhibcood. dhibcood Daily waxaa loo qaybiyey sidii ay tirada of khamaar kaalinta iyo waxqabadka. kasta 24 saacadood (Saqda dhexe ee Moscow), barbar dheelitirka iyo arko haddii adeeg kasta oo lagu soo sameeyay. Sidaa darteed, Waxa uu noqday account ah dhibcood qaybinta.
dhibcood = (baaqiga – adeegi) * magdhow% / 100
% Compensation = guuldarada ama guusha 10 dheelitirka / *
In case of guul, fiirsaneysa dakhliga saafiga ah ka sharadka.
In case of guul darro, qiimaha lumay ee loo tiriyo.
khamaar All qiyamka in la qaado ayaa lagu daray iyo foomka “guuldarada ama guusha.”
Waxa ay u muuqataa yara adag tahay in la fahmo, laakiin on site for sharaxaad faahfaahsan oo dheeraad ah. Dhammaadka maalinta, account la sameeyo iyo user helo qodobada ku haboon.
In hab this, iyadoo aan loo eegin bet isboortiga waxaa ku guuleystay, qodobada guul ciyaaryahan ma bet ah. The la mid ah sida “Bonus on your baaqiga”, waxaa formula ah in ay go'aamiso tirada dhibcood in lagu abaalmariyey.
Points = Bet Lacagta ($) * qiimaha dalab
qiimaha dalab = xidid square qiimaha bet yar 1.
= Sahayda ugu badnaan 5.
12 gunooyin iyo horumarka ka badan
Waxa intaa dheer in kuwan dallacaadaha hore, sharad la Seeraar ama cryptocurrency kale ee 1xBit aad haysato 12 fursadaha bonus labadaba sharadka casino iyo isboortiga. Waxaa jira gunno maalin walba oo todobaadle ah iyo horumarka labada hoos.
Inta badan dhacdooyinka isboorti weyn ee maalinta heli accumulator gaar ah. khamaar ah ku guuleysan isugu keenaa horumarinta this heli doontaa 10% korodhka qiimaha.
Yuu yahay taageere tartanka iyo, haddii ay qalad ah in cayaaraha dalab u dhaco aad ka heli karto inay ku guuleysato Ghanna ee naadi ee “formula 1” 1xBit
Tani waa maxaa yeelay, m₿1 kasta laga badiyay, ciyaaryahanka freewheeling 1 oo ku guuleystay ciyaarta. Si aad xaq ugu dhiirrigelinta this, dalab waa in ay ahaadaan ugu yaraan m₿1 heerka ugu yar ee ah 1,4. Oo haddii bet ah ururtay ugu yaraan hal malee in ay ku sugan Formula 1.
Oo weliba, aad criptomoedas, 1Xbit khamaarka casino iyo ciyaaraha sharadka dhibcood uu kasbaday dhibco badan in la soo furan karaa goobta dukaanka. waxaa, dhibcood waxaa lagu badelay khamaarka ama codes kale, saadaalino, caymis ama khamaarka at casino, ama waxaa loo roggi karaa lacag caddaan ah. Waxaa ku saabsan tahay 30 fursadaha furashada kala duwan.
kasta 500 tilmaamay qiimihiisu US $ 10. la 50 dhibcood, tusaale ahaan, waxaad ka iibsan kartaa code a for sharad free on dhacdo isboorti kasta xigtay 1,8 ama ka badan. Waxa kale oo aad ka iibsan kartaa laabta khasnad in ay isku dayaan in ay nasiib leh horyaal, tigidhada bakhtiyaa, raasamaal sharadka lacag la'aan ah kubada cagta iyo sidoo ..., dukaanka waxaa ka buuxa doorashooyinka.
1Xbit waa lagu kalsoonaan karo?
Marka la hawlgala kaliya criptomoedas ciyaarta maxalliga ah, shaki la'aan, 1Xbit yaraysaa fursadaha aad, laakiin waqti isku mid ah leeyihiin xoriyadda in ay bixiyaan lacagaha dalwaddii, sida jarida cajalad cas iyo inay hubiyaan aqoonsiga ee dadka isticmaala.
Qaab dhismeedka A isagoo aad u xoog badan, inkastoo ay leeyihiin koox la mid ah in waddaa 1xBet, sharad lacagaha Fiat Rafaa sidoo kale aqbalay criptomoedas, ma jiraan wax khatar ah in goobta ma bixiyo ciyaartoyda ay. Laakiin sida 1xBit 1xBet ma siiso macluumaad si fudud. Waxay leedahay goobta qalliinka ee liisanka sharadka Seeraar ee Curacao.
1xBit waxay kaloo bixisaa adeegyada Forex kuwa maal-criptomoedas.
Hababka Payment: Dhigashada iyo qaadashada
halka 28 criptomoedas kala duwan 1xBit la aqbalay talinaynaa isticmaalaya Seeraar in ay lacag ku shubto guriga. Waayo, kuwa ay leeyihiin si fudud u bitcoins qaybta “lacagta”, doorasho “xoog”, ah “Buy cryptocurrency” (badhan cas, si fudud u aqoonsan karo), oo guryaha 66 criptomoedas Exchange waxaa lagu soo bandhigaa. Dooro a bitcoins lagu kalsoonaan karo oo buy.
Ka dib heshiiska waxiibsashada, kaliya wareejiyo criptomoedas ee xisaabtaada 1xBit. 1Xbit ahaa mid ka mid ah guryaha in ay yimaadaan suuqa si ay u buuxiyaan bidix uu madhan yahay guriga Bovada by sidoo kale aqbalaan bitcoins, laakiin hawlaha joogsadeen Brazil.
Si aad lacag ula soo baxdo, waxaa 20 criptomoedas aqbalay kala duwan, iyo geeddi-socodka waxaa loo beddeli in lagu aamino kala iibsiga waxaa laga sameeyey bookmaker ee boortofooliyada encryption.
kala duwan ee isboortiga daboolaya guriga iyo tirada suuqyada ka hor kulan la heli karo live dhigi Kompany oo marnaba aan meel ay ku play. fursadaha aad u badan yihiin in aad kala dooran kartaa oo profile menu Range Sports oo waxaa jira a “dhacdooyinka waaweyn” kuwa jecel yihiin in ay raacaan koobabka ugu muhiimsan ee dunida, iyadoo aan loo eegin cayaaraha.
cayaaraha Our jecel, kubada cagta, Waxay u taagan tahay soo baxay si cad oo guriga, daboolidda horyaalka waaweyn ciyaaray guriga iyo Taxanaha A si ay u D, Cup Brazil ah, League haweenka iyo Gobolka.
Si aad xaq u leedahay ee shaashadda, wax yar ka hooseysa halkaas oo tigidhada iyo Khamaarka ma aha dhawaaqay of dalabyo gaar ah, kuwaas oo ah kuwa ay bixiyaan suurtagalnimada weyn oo guriga ku guuleystay. 1Xbit goobta khamaarka sidoo kale bixisaa dadka isticmaala bogga leh oo kaliya dhacdooyinka pre-kulan Inta badan gaar ahaan, oo dhan u baahan statistics Kompany oo aan raadiyo macluumaad, Google oo lagu daray.
E, sida bookmaker kasta, wuxuu hubinayaa 1xBit bixiya ee u qalmay ugu fiican ee suuqa. Ma aha had iyo jeer si, laakiin guriga si fiican u bixiyo, sim. Ka sarreeyaa celceliska ee dhacdooyinka isboorti ugu. Haddii aad ogtahay sida loo sameeyo isticmaalka wanaagsan ee dhibcaha aad, gunooyin iyo maalin u ururay si aad u hesho beec weyn.
Tani goobta khamaarka Seeraar ayaa feature a in la helo dhulka oo dhan dhufto ee laanta, taas oo ah suurtagalnimada ee dhismaha tiirarka. Ciyaaryahanka ayaa dooran kartaa suuqyada iyo samayn male aad, e, ka dibna, guriga ayaa u qalmay.
ka dibna, haddii aad raadinayso kala duwan iyo ciyaaraha sharadka aan caadi ahayn, aad awoodid, in 1xBit, bet kubada cagta, volleyball, kubada kolayga ee toogashada, kolayga iyo Brolin. Waxa kale oo jira ma fursadaha ciyaaraha, sida cimilada, siyaasadda iyo sayniska.
In ka badan 3.000 tirada booska shirkadaha ixtiraamo suuqa fursadaha. Total, guriga uu leeyahay 92 software u ridanayaan in mishiinada iyo khamaar kale, baccarat Como, keno, blackjack, Turubku e roleta, ka mid ah fursadaha kale. Liiska waxaa ka mid ah magacyada sida qeybiyeyaasha Endorphina, waaqiciga ah iyo ciyaarta Betsoft, kaliya si ay u muujiyaan in 1xBit waa lagu kalsoonaan karo.
Waayo, kuwa door bidaan in tayada play casino live sidoo kale waa heer sare ah. Waxaa 12 qeybiyeyaasha, oo ay ku jiraan kuwa Ezugi iyo Game Evolution la ururiyey la ganacsada live u ciyaaro roulette, turub, blackjack, baccarat, craps, Monoboli iyo hababka kale. Dhammaan gargaarka oo gurigaaga ah.
Ma aha in aad bet celcelis
Waayo, kuwa jeclaan khamaar ama phone kulan casino, 1Xbit leeyahay hab deg deg ah, ammaan ah oo si aad u wanaagsan in keentaa oo dhan muuqaalada goobta. Oo haddii aadan rabin in ay ku rakibi 1xBit codsiga, goobta waa xasaasi ah, in si kale loo dhigo, ku habboon shaashadda yar aad casriga oo aan laga badinin ka shaqeynayaan.
Noqo codsiga 1xBit ama browser on your smartphone, waxaad si fudud u raaci kartaa idaacadaha badan oo madal, iyo sidoo kale ka ciyaaro casino nool, iyada oo aan dhaawac ciyaaryahanka, tan iyo gudbinta waa iftiin. Shuruudaha looga baahan yahay oo kaliya waa xiriir Internet deggan a.
Codsiga waxaa la heli karaa for download on goobta by 1xBit mobile Android iyo macruufka.
1Xbit sharadka live
Tani waa arrin in goobta ayaa sheegay in ku faraxsan tahay in ay mudnaan. Hana been ma markuu ku faantaa in. daayaa live ah dhacdooyinka ugu waaweyn ee cayaaraha dunida, oo uu leeyahay feature aad u xiiso badan, taas oo ah “Home MultiLive” waxaad ku dari kartaa dhacdooyin badan in la raaco sharadka live iyaga on mar aan dareenka dhacdooyin kale.
Oo Sharad live 1xBit aan ku xaddidnayn ciyaaraha dhaqanka. Bogga waxaa kaloo ku leeyahay caymiska oo dhamaystiran ee sports elektarooniga ah (e-sports), cayaaraha elektarooniga ah. Waxaa idaacadaha Counter Strike, Hearthstone, Starcraft II, Xulka Royale, Fifa, Dota, lol, Rainbow Lix e Streetfighter, ka mid ah kulan kale oo caan ka ah consoles'ka kala duwan.
Haddii aad fahamto oo aad ku dhaqmaan cayaaraha elektarooniga ah, 1Xbit uu leeyahay mid ka mid ah bedeley ugu dhameystiran inay ku raaxaystaan ​​iyo sheegayaa inuu m₿.
Iyo ciyaaryahanka, ha ahaato ciyaaraha ama isboortiga elektarooniga ah, leeyihiin at statistics qubo ay updated live in ay sii awaalo ama la xiro bet a (uu u adeegi) aad rabto in aad.
kaash celin VIP
barnaamijka daacad ka go'an in ay ciyaartoyda casino 1xBit, leeyahay 8 heerar kala duwan. The more ciyaaryahanka u ciyaara, dhibcood oo dheeraad ah waxaad ka heli, heerka sare iyo soo celinta lacag ay heshay. codsiga soo celiyo ayaa la samayn karaa todobaadle ah.
In heer kasta helay, korodhka boqoleyda dib lacagta, gaarey ilaa 11% soo celiyo.
Waxaa jira la taliyayaal online waqtiga oo dhan la heli karo si user ee chat live ah, oo aan haysan si ay u aqoonsadaan 1xBit xiriir. Laakiin haddii shaki la xalin in qalab this, waxaad email u bookmaker diri kartaa. haddii ay taasi ku, Dabcan, Waxay u baahan tahay in cinwaanka e-mail si aad u hesho jawaabta. Ikhtiyaar kale waa nooc ka mid ah in aad buuxiso iyo soo dirto fariin marayo goobta, kaas oo sidoo kale ku baaqay in cinwaanka -email.
Haddii ay jiraan fursado xiriir badan ma, jawaabta si degdeg ah helo khilafyada ka yimaado.
1xBit ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay joogitaanka wanaagsan on shabakadaha bulshada, iyada oo xoogga on Twitter iyo Instagram, halkaas oo pages Brazil waa mid aad u firfircoon. The channel YouTube sidoo kale waa mid aad u mashquul, laakiin ma laha version ah ee Portuguese.
ugu dambeyntii, goobta ayaa blog ah si ay u sii macaamiisha aad ku wargeliyay. Keenaya news saabsan adduunka ciyaarta, criptomoedas, dallacsiinta iyo ciyaaraha cusub ku jiraan madal. Oo aad si joogto ah qaybta updated la xidhiidha ciyaaraha elektarooniga ah. Waxaa xusid mudan.
Waa mid ka mid ah luqadaha ugu badan uu ka ogaaday goobaha. Aan ka yarayn 60 luqadood oo kala duwan. O 1xBit, la koobna criptomoedas u doortay inuu baabbi'iyo xuduudaha isbedel, oo sida xaqiiqada ah doonayaan in ay ka gudbaan dhammaan xadka jirka meesha sharadka la oggol yahay.
Xitaa in qof kasta dareemo raaxo halka daalacanaya iyo ka dhigi ay falanqaynta, guriga bixisaa lix qaabab kala duwan yeerida. jajab tobanle, in uu yahay mid aan loo isticmaalaa in lagu in Brazil, US, UK, Hong Kong, Indonesia iyo Malaysia. Yaa doonaya inuu ka bet heli qaab kasta oo loo yaqaan.
wadamada laga saaray
Dhig 1xBit diiwaangelinta. Ha tegin maqan fursadaha sharadka
1xBit The qaaday ciyaaraha sharadka criptomoedas heer cusub, iyo tartanka u guurayaan, waxa qof u wanaagsan oo dhan oo naga mid ah. goobaha intooda badan la sumcad wanaagsan iyo shaqo waxaa, ugu fiican ee bulshada ciyaaraha ah. Kale ee guryaha khamaar wanaagsan in ay aqbalaan Seeraar waa Sportsbet.io iyo 22bet.
1xBit waa lagu kalsoonaan karo oo ay leedahay mid ka mid ah bedeley ugu weyn ee macaamiisha aad. Haddii ciyaaraha sharadka ciyaaraha elektaroonik ah ama in ay casino weyn, madadaalo waa la hubaa in ciyaaryahanka.
Waxaa jira kanaallo badan ee isgaarsiinta, laakiin waxay si fiican u shaqeeyaan. Waxa suurto gal ah, xitaa cadadka wax la heli karo, madal ay u ekaan kartaa xoogaa wareeriya, iyo cilmi qaar ka mid ah waxaa loo baahan yahay bedeley ilaa aad ka heshid waxa aad rabtid. Tani waa mid ka mid ah qodobada ay tahay in lagu wanaajin karaa iyada oo guriga.
Si kastaba ha ahaatee, falanqaynta guud, 1Xbit waa meel aad u fiican si ay u abuuraan xisaab – taas oo ah mid aad u sahlan oo degdeg ah – iyo maal ay ciyaarta waqti lacag la'aan ah iyo arko dunida ka mid ah criptomoedas.
farsamaynta ba'an ee diiwaanka oo aan u baahan si ay u aqoonsadaan
fursado badan dhammaan goobaha: ciyaaraha, casino iyo isboortiga
Codsiga iyo goobta mobile aad u wanaagsan
Tiro badan oo ka mid ah dhacdooyinka ku nool daayaa
taxane ah dallacaadaha
site waxaa yara wareersan by macluumaad aad u badan
Waxaa dhici karta in Tiro badan oo channels adeegga
1xBit kaliya sharad la Seeraar iyo criptomoedas?
Sim, 1Xbit waa Somailand gaar ah loogu talagalay bitcoins iyo altcoins. site waxay bixisaa fursado badan bitcoins ama altcoins iibsato aad madal.
Sidee Seeraar shaqada bonus 1xBit?
guriga waxay bixisaa gunno 100% on qiimaha deposit hore ugu badnaan ₿1. Waxaa kaloo jira gunooyin ee labaad, deposit saddexaad iyo kan afraad oo faa'ideysatay gaari karaan ₿7.
Sida loo Bet la Seeraar in 1xBit?
Haddii aadan haysan bitcoins ama cryptocurrency kale aqbalay by bookmaker, waxaad bedelan kartaa guryaha m₿ dhabta ah ee ku qoran goobta 1xBit. Marka aad qabtid bitcoins aad on account, geedi socodku waa isku mid ah in khamaar meeleeyey lacagaha Fiat.